Fety de Basikety : Eo ambany fiahian’i Mbola Rajaonah
07/09/2018 admintriatra 0
Hiditra sahady amin’ny lalao famaranana goavana ny hetsika “Fety de Basikety”, izay karakarain’ny klioba sady fikambanana AT2B Andraisoro. Mankalaza ny faha-10 taona izy ireo amin’izao fotoana izao. Araka izany, ny filoha tale jeneralin’ny Vondrona RLM …Tohiny
Filankevi-panjakana : « afaka mitsara araka ny lalàna »
Naneho ny heviny ny mpahay lalàna sady mpampianatra lalàna ary mpikambana anivon’ny antenimieran-doholona, Honoret Rakotomanana, omaly mikasika ny raharaham-pirenena. Isan’ny noresahina ny fisian’ny fifanitsahana andraikitra eo amin’ ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana sy ny …Tohiny
Fanafihana Gastro Pizza : Efatra voasambotra
27 aogositra nihosin-dra. Nahitam-bokany avokoa ireo asan-jiolahy niaro fanadatsahan’aina nampihorin-koditra niseho teny Imerintsiatosika sy By pass ny alin’io andro alahady io. Voasambotra ireo nandray anjara tamin’ny halatra sy vonoan’olona nahafaty mpiambina, efatra no nosamborin’ny polisy …Tohiny
Novonoiny ny vadiny : Nitolo-batana izy
Nisavorovoro ireo mpifanolo-bodirindrina. Sambany no nisy vehivavy nahavita habibiana tahaka ity teto amintsika. Mpivady mbola ao anatin’ny fahatanorana, manan-janaka iray manodidina ny 6 taona no nifamono tamin’ny alalan’ny antsy, teny Ambohijanaka Ilafy, ny alin’ny alarobia …Tohiny